‘घुस’ लाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्न माग ! – Gaule Media ::
Home/रोचक/‘घुस’ लाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्न माग !
ramsharan२० कार्तिक २०७४, सोमबार ०१:४६
नेता तथा कर्मचारीले घुस खाएका समाचार आइरहन्छन् । घुसको मामिलामा मानिस स्वभावैले निकै खन्चुवा हुँदोरहेछ । धेरैलाई खान मनपर्ने चिज होला घुस भन्ने कुरा । सायद सोही कारण घुसलाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
समाचार भारतको हो । अहिले भारतमा खिचडीलाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्नुपर्ने माग कतिपयले गरिरहेका छन् । यद्यपि एकजना मन्त्रीले यो माग अस्विकार गरिसकेका छन् । खिचडीलाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्ने माग मन्त्रीद्वारा अस्विकार भएको सम्बन्धमा बिबिसीले एउटा सर्भेक्षण गरेको छ भारतमा, आखिर भारतीयहरु कुन खाना भारतको राष्ट्रिय खाना होस् भन्ने चाहन्छन् ? भनेर । यस विषयमा भारतीयहरुले ट्विटर तथा फेसबुकमा आफ्नो राय दिइरहेका छन् ।
समोसा, नून रोटी, दाल भात आदिलाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्नुपर्ने धारणा कतिपय गरेका छन् । तर एकजना प्रयोगकर्ताले घुसलाई भारतको राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्नुपर्ने भनेर ट्विटेपछि त्यसले निकै चर्चा पाएको छ ।
एक हिन्दुस्तानी नामक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले घुसलाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।
कतिपयले आलु परौँठा त कतिपयले पुरी तरकारीलाई राष्ट्रिय खाना बनाउन माग गरे । मटन पुलाउ देखि चटनी रोटीसम्मलाई राष्ट्रिय खाना बनाउने माग पनि उठेको छ जबरजस्त ।
१८ कार्तिक २०७४, शनिबार ०४:१७